» एसिड छ्याप्नेलाई २० वर्ष कैद !
दुईमध्ये एउटा अध्यादेश एसिड आक्रमण, कैद जरिवाना र क्षतिपूर्तिसम्बन्धी छ भने अर्को अध्यादेश एसिड खरिदबिक्री, आयात, भण्डारण र प्रयोगबारे हो । स्रोतका अनुसार एसिड आक्रमणबाट कसैको ज्यान गए अहिले भएकै अधिकतम सजाय जन्मकैदलाई यथावत् राख्ने र अंगभंग/शरीर कुरूपलगायत गराए २० वर्षसम्म कैद हुने गरी मस्यौदा बनाइएको छ । यो अपराधमा संलग्नलाई सजाय छुट दिन नमिल्ने प्रावधान पनि मस्यौदामा छ ।
थापाले एसिड आक्रमणमा संलग्न अपराधीलाई जिन्दगीभर अनुभूति हुने किसिमको दण्ड/सजाय हुनुपर्ने भएकाले त्यहीअनुसार अध्यादेशको मस्यौदा तयार पार्न आफूले सुझाव दिएको बताए । ‘अपराधी केही वर्ष जेल बसेर छुट्ने तर पीडितले जिन्दगीभर चोटको पीडा सहेर बस्नुपर्ने बाध्यता छ, यसलाई मलमपट्टी लगाउन पीडकलाई कडा सजायको भागीदार बनाइनुपर्छ । पीडितलाई उपचार/ उचित राहत व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ,’ उनले भने । एसिड खरिदबिक्रीका कडा प्रावधान बनाउन पनि आफूले सुझाव दिएको बताए ।
एसिड बिक्री तथा यसको प्रयोग कसले गर्ने भन्नेमा मापदण्ड नहुँदा दुरुपयोग हुने गरेको छ । उद्योग/कारखानादेखि सुनचाँदी पसललगायतमा यसको खपत हुन्छ । सजिलै खरिद गर्न पाइन्छ । प्रहरीका अनुसार एसिड आक्रमणका अधिकांश घटनामा रिसइबी, प्रतिशोध, प्रेम सम्बन्धमा खटपट, घरकलह, अंशबन्डा विवाद, आवेगलगायतसँग जोडिएको पाइन्छ ।
प्रहरीबाट आएका रायसुझावलाई गृहको कानुन महाशाखाले कानुन मन्त्रालयमा पठाएको थियो । त्यसपछि कानुनले एसिड खरिदबिक्री र प्रयोगको नियमन एवं एसिड आक्रमणबाट कसैको मृत्यु, अंगभंग/घाइते भए कस्तो किसिमको कैद/जरिवाना र क्षतिपूर्ति हुने भन्ने प्रावधान राखेर प्रारम्भिक मस्यौदा आयोगमा पठाएको हो । गृह मन्त्रालयका कानुन महाशाखा प्रमुख पुष्कर सापकोटाले एसिड प्रहारबाट हुने अपराध र यसको खरिदबिक्री तथा प्रयोगसम्बन्धी कठोर कानुन बनाउन लागिएको बताए । प्रहरी प्रधान कार्यालयले कसुरमा संलग्नको सम्पत्ति रोक्का राख्नुपर्ने सुझाव गृह मन्त्रालयमा दिएको थियो ।
सुरुमा पक्राउ परेकामध्ये केही प्रारम्भिक अनुसन्धान र केही अदालतको आदेशमा छुटे । बाँकी अधिकांश कारबाहीको दायरामा आइसकेका छन् । प्रहरीका अनुसार पछिल्ला ६ वर्षमा भएका एसिड आक्रमणका घटनामध्ये प्रेमसम्बन्धमा विवादका ८ वटा, आवेग/कुरूप बनाउने आर्थिक लेनदेन र जग्गा/अंशबन्डा विवादका ८ वटा र डर देखाउने १ गरी १७ वटा घटना भएका छन् ।
खरिदबिक्री कसरी हुन्छ ?
कस्तो छ कारबाही व्यवस्था ?
मैजुदा कानुनमा एसिड आक्रमण गर्नेलाई १८ वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ । एसिड हानेर घाइते मानिसको ज्यान गए त्यसलाई व्यक्ति हत्या (कर्तव्य ज्यान) को कसुरमा मुद्दा लाग्ने व्यवस्था मुलुकी अपराध संहिता ०७४ ले गरेको छ । एसिड आक्रमणबाट ज्यान गए जन्मकैदको सजाय हुन सक्छ । हालको कानुनमा जन्मकैद २५ वर्षलाई मानिएको छ । संहिताको दफा १८३ (२) मा कसैले कसैको ज्यान मार्ने नियतले कसुर गर्ने गराउनेलाई १० वर्ष कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने
मुलुकी अपराध संहिता (ऐन) ०७४ जारी हुनुअघिसम्म एसिड आक्रमण भए कुटपिट गरेको कानुनसरह मुद्दा चल्थ्यो । मुलुकी ऐनको कुटपिटसम्बन्धी महलमा ‘तेजाब इत्यादिले पोली डामी/दली घसी इत्यादि गैरकुरा गरी जीउमा पीडा गराउनेलाई अंगभंग कुरूप भएको रहेनछ भने आङ, मुख, कानमा पोलेको भए पचास रुपैयाँ जरिवाना र दुई महिना कैद, नाक, आँखा भए एक सय जरिवाना र चार महिना कैद, गुदद्वारमा भए दुई सय रुपैयाँ जरिवाना र आठ महिना कैद, लिंगमा भए चार सय रुपैयाँ जरिवाना र एक वर्ष चार महिना कैद, योनीमा भए आठ सय रुपैयाँ र दुई वर्ष आठ महिना कैद सजाय’ हुने प्रावधान थियो ।